ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းကြီးများ
Burma—International Religious Freedom Report 2009။ U.S. Department of State (26 October 2009)။ 11 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pranke, Patrick A (2013)၊ Myanmar၊ Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA. ISBN 0-02-865718-7
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 17 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Introducing Myanmar Festivals။ Yangon City Development Committee။ 14 June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Paw၊ Maung H.။ Preparation for A Place of Worship At Home။ 28 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Thanissaro Bhikkhu (1997)။ Jaravagga: Aging။ Access to Insight။ 28 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Schober၊ Juliane (2002)။ Sacred biography in the Buddhist traditions of South and Southeast Asia။ Motilal Banarsidass။ pp. 275–276။ ISBN 978-81-208-1812-5။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 17 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။